သြော်မိန်းမ မိန်းမ – Grab Love Story
ဖတ်ကနဲ..ဖတ်ကနဲ လိုးဆောင့်ချက်တွေက ထိမိ လှ သည် …။ သူဆောင့်လိုက်တိုင်း နီနီ လဲ ပြန်ပြန် ကော့ပေးမိ သည် …။သူမ ဖင်ကြီးတွေ ကို ဝေ့ကာဝိုက်ခါ ပေးနေသည် ..။ အာဝါး က ဘယ်ညာပြေးနေသော ဖင်ဖြူဖြူကြီးတွေကို လက်နဲ့ ချုပ်ကိုင်ထားပြီး တဖန်းဖန်းဘဲ လိုးဆောင့်လေ သည် …။ ( ကောင်းလား …) ( အင်း..အင်း ..) လိုးဆောင့်တဲ့ လူက ဆောင့်သလို အောက် က ခံတဲ့ သူကလဲ ကော့ပေးလိုက် စောက်ဖုတ်နှူတ်ခမ်းတွေကို ညှစ်ပေးလိုက်နဲ့ တက်ညီလက်ညီ လိုးကြရာ မကြာခင် မှာဘဲ နှစ်ဦး စလုံး ပြိုင်တူ ( ပြီး ) သွားကြလေ တော့ သည် ..။အာဝါးလဲ လီးကြီးကို မေသက် စောက်ဖုတ်ထဲက ပြန် မထုတ်ဘဲ တဆုံးသွင်းထားကာ နီနီ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖိရက်ကြီး မျက်စိတွေ ပိတ်ခါ နားနေလေ သည် ..။ ( ဖယ်အုံးကွယ်..မင်း..ကိုယ်ကြီး က လေးလိုက်တာ .) ( နောက်တခါ လိုးအုံးမှာ …) ( လိုးရမှာပါကွာ..မမလဲ မင်းလိုးတာ ကောင်းလွန်းလို့ ထပ် ခံချင်ပါသေးတယ် …) အာဝါးလဲ လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက် သည် ..။
သင်္ဘော မာလ်ိန်မှူး ( ကပ်ပတိန် ) က မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို့ကို ၀င်ပြီး ကုန်တင်ရမည် လို့ ပြောသည် ..။ မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေမို့ ရန်ုကုန်ကို ပြန်ဝင်မည် ဆိုတော့ အလွန်ဘဲ ၀မ်းသာ သွားကြလေ သည် ..။ ဒီ ကြေငြာချက်ကို မာလိန်မှူး က သင်္ဘော ရန်ကုန်ကို စ ဦးတည် ခုတ်မောင်းတော့မှ ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်လို့ သင်္ဘောသားများ သည် မိမိတို့ ဇနီးမယားမိသားစုတွေကို ဖုန်းဆက် အကြောင်းမကြား လိုက်နိုင်ကြ ပေ ။ ရန်ကုန် ရောက်မှဘဲ မိသားစုတွေကို အံ့ အားသင့် သွားအောင် ရုတ်တရက် အိမ်ပြန်သွားကြရ မယ်လို့ သင်္ဘောသား အားလုံး က တိုင်ပင်နေကြ သည် ..။ ကျော်သိန်းတို့ ရန်ကုန်ရောက်တော့ ပန်းဆိုးတန်း ဆိပ်ကမ်းမှာ သင်္ဘော ကပ်လေ သည် ..။ ကျော်သိန်း က လေးဘီးအငှားကားကို တခြားသင်္ဘောသားတွေနဲ့ အတူ ပေါင်းငှားလာပြီး လမ်း၅၀ ထိပ်တွင် သူက ဆင်းကျန်ခဲ့ သည် ..။
( အင်း….) ( ကောင်းလိုက် တဲ့ စောက်ပတ် …) ကျော်သိန်း ရေရေလည်လည် ဆောင့်လိုးသည် ..။ အားကုန် ဆောင့် သည် ..။ဆက်တိုက် ဆောင့် သည် …။ အချက်၅၀လောက် ဒလကြမ်းဆောင့်ပြီး သုတ်တွေ နီနီ့ စောက်တ်ထဲ ပန်းထုတ်ခါ ပြီးသွားလေ သည် …။ ကျော်သိန်း သုတ်ရေ တွေ ပေလူးနေတဲ့ လီးတန်းလန်းကြီးနဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင် သည် ..။ ( နီနီ ….) ( ရှင် …..အကိုကြီး …..) ( အကိုကြီး ..ဒိန်ချဉ်..သောက်ချင်တယ်ကွာ …ဒိန်ချဉ် သွား ၀ယ်ပေးပါလား ……) ( ဟုတ်ကဲ့ …အကိုကြီး ……) နီနီ အ၀တ်အစား ပြန်ဝတ်ပြီး တိုက်ပေါ်က ဆင်းခဲ့ သည် ..။ ဒိန်ချဉ်ဆိုင် က တလမ်းကျော်မှာ …။ ဒိန်ချဉ် ဆိုင်ဘေး က စာအုပ်ဆိုင် က ဖုန်း နဲ့ ဖိုးတာ ကို နီနီ ဖုန်းဆက် လိုက် သည် …။ ဖိုးတာ က ( မမနီ ကို သိပ် လွမ်းနေတယ် ….) တဲ့ …။ နီနီက မနက်ဖန် ညနေဆို ကျော်သိန်း သင်္ဘောထွက်မှာမို့ မနက်ဖန် ညဦးပိုင်းမှာ ချိန်း လိုက် သည် …။